Golaha Shacabka oo ansixiyay miisaaniyadda dheeraadka ah ee 2018ka – Kalfadhi
Golaha Shacabka oo ansixiyay miisaaniyadda dheeraadka ah ee 2018ka
November 14, 2018 November 16, 2018 Kalfadhi
Golaha Shacabka ayaa ogolaaday iney meel mariyeen miisaaniyad dhan 22 milyan iyo bar oo Doolarka Mareykanka ah, taas oo uu Wasiirka Maaliyadda, Cabdiraxmaan Beyle, sheegay iney ku soo korortay miisaaniyadda 2018-ka. Golaha ayaa maalin ka hor diiday iney ansixiyaan miisaaniyaddaas, iyada oo aan loo caddeyn meesha ay ka timid, sababta ay uga soo dib dhacday waqtigii ay sharci ahaan sax ahayd in la soo gudbiyo iyo cidda loogu talogalayo, oo uu Wasiirku sheegay iney tahay ciidanka dowladda.
Guddiga Maaliyadda iyo Miisaaniyadda ee Golaha Shacabka ayaa labadii maalin ee la soo dhaafay kala shaqeynayey Wasaaradda iney hufaan miisaaniyaddaan soo korortay. Xoghaya Guddigaas ayaa ku qanciyey Golaha iney ansixiyaan miisaaniyadda, waxaana 158 Xildhibaan, oo kulankii maanta joogtay ay 153 ka mid ah ogolaadeen miisaaniyadda, iyada oo ay 2 Xildhibaan diideen, halka 3 kalena ay ka aamuseen.
“Waxaan hoosta ka xariiqayaa in aysan sax ahayn, oo xubnaha waxay xaq u lahaayeen in ay aragtidooda ka dhiibtaan” ayuu yiri Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur, Xogahayaha Guddiga Maaliyadda iyo Miisaaniyadda ee Golaha Shacabka. Hadalkiisa ayaa jawaab u ahaa markii uu Shir Guddoonka Golaha ka manciyey Xildhibaanada fursad ay uga aragti dhiibtaan miisaaniyadda ay ansixiyeen, taas oo ay Mudanayaasha qaar ku eedeynayaan Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha, Cabdiwali Ibraahim Muudey, oo maanta shir guddoominayey Kulanka Golaha Shacabka.
Qodobka Ajandaha Golaha waxa uu u qornaa “u codeynta ku noqoshada miisaaniyadda 2018 ”, hase ahaatee waxa uu Goluhu 12-kii Nofeembar ka dooday, maantana ansixiyey kaliya miisaaniyaddaas soo korortay, taas oo uusan Wasiir Beyle si cad u sheegin halka ay 17 milyan oo Doolar oo miisaaniyaddaas ka mid ah ka timid.
Beyle ayaa uga mahadnaqay Golaha ansixintooda miisaaniyadda, wuxuuna yiri “waxaa iga dhaadhacsan in sharciga la raaco, wakhtiga loo baahan yahayna la idiin siiyo, laakiin meel walba waxaa jira waxyaabo soo kordha”. Sababta ugu weyn ee dhiiragelisay in miisaaniyaddaas si deg deg ah loo ansixiyo waa inuu Wasiirku sheegay in loogu talogalay ciidanka dowladda.
Inkasta oo aysan Xildhibaanadu maanta wax dood ah iyagoon ka keenin miisaaniyadda ay ansixiyeen haddana, maalin ka hor waxay qaarkood muujiyeen tuhun ah in miisaaniyaddaas ay tahay qarash horay loo isticmaalay, sida uu qabay Xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble, oo yiri “Lacagtaan ma lacago la isticmaalay baa, illeen maalin dhaweyd waxaan arkeynay Xildhibaano laga keenay Koofur Galbeed, oo la siiyey min 5000 oo Doolar e?”.
Golaha Shacabka oo mar labaad ka dooday dib-u-eegida miisaaniyadda dowladda
Xildhibaan Cosoble: Guddoomiye Muudeey wuu afduubay fadhiga Golaha Shacabka